Momba anay | ZHEJIANG JIAWEI ARTS & CRAFTS Co., Ltd.
Zhejiang Jiawei Arts & Crafts Co., Ltd dia mpanamboatra sy mpanondrana zava-maniry voajanahary ， voninkazo ， ravina ary hazo. Eto amin'ny tanànan'i Dongyang, faritanin'i Zhejiang, Chine isika. Ny vokatra lehibe misy anay dia ny hazo palmie artifisialy, ny hazo Ficus, ny hazo akondro, ny hazo amboadia, ny voaniho, ny hazo akondro, ny zavamaniry Dracaena, ny orkid na tanimbary ary ny voly Monstera sns.
Niorina tamin'ny 2003, ny orinasa kami dia faritra 26000 metatra tora-droa ary efitrano fampisehoana 400 metatra toradroa. Amin'ny 1600 maraina, ny mpiasa ao aminay izao dia manana mpiasa maherin'ny 200 sy maodely an'arivony. Ny tambajotra varotra dia mivelatra any amin'ny firenena 40 eran'izao tontolo izao, ary milalao tsara ao AUSTRALIA, UK, GERMANY, FRANCE, POLAND, JANPAN, Mexico, BRAZIL ary firenena sy faritra hafa.
Ny fahombiazan'ny Jiawei dia tsy avy amin'ny vokatra ihany fa manana kalitao tsara, ary mahay fahaizana mifehy ny vidiny, fa koa manao fikarohana, fanatsarana ary fikatsahana fanavaozana. Ny fananganana ekipa mpamorona matihanina, ny fividianana ekipa famokarana mivoatra ary ny fametrahana rafitra rafi-pitantanana mahazatra dia manome antsika hitazona ny fahafaha-manao fifaninanana mahery sy ny fironana maharitra maharitra amin'ny taona manaraka.
Tamin'ny taona 2018 dia nandalo ny Sedex Audit ny orinasa iray. ny fahafahantsika famokarana isam-bolana dia hatramin'ny 30 kaontenera 40 HQ.
"Ny mpanjifa aloha, mifototra amin'ny serivisy, ny fanararaotana ary ny fanavaozana, kalitao avo lenta" no torolalana sy fitsipintsika. OEM dia afaka amin'ny antsika koa. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa avy ao an-trano sy any ivelany mba hanorina fiaraha-miasa ary hamorona hoavy mamirapiratra miaraka amintsika.